Malunga nathi -Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd.
I-Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd. ibekwe kwiPhondo laseJiangsu, idolophu entle yamanzi emazantsi oMlambo iYangtze, ejikelezwe yiShanghai, iNanjing, iSuzhou Xichang kunye nezinye iindawo ezisezidolophini. Umzi mveliso ufumaneka kwiDolophu yaseJinfeng, kwisiXeko saseZhangjiagang, kwilizwe loshishino lwe-metallurgical, uNombolo 48, indlela i-Huarun.
Le nkampani iseti yophuhliso esizisebenzelayo kunye nenkqubo yemveliso, uphuhliso lwemveliso ezisebenzisekayo engaqhelekanga, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo njengenye yamashishini ezobugcisa.
Inkampani ithatha indlela yezobunzululwazi ehamba phambili ngolawulo olungqongqo, izama ukugqibelela, kwaye izabalazela ukwenza iimveliso ezingcono. Ibambelela kumgaqo womgangatho wokuqala, igama lokuqala, kunye nomgaqo weshishini. Yenza yonke imizamo yokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo ezifanelekileyo kubavelisi bolawulo kunye nokuhlangabezana neemfuno ezizezakho zabathengi kunye namashishini.
Wamkelekile abathengi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba baxoxe, basebenze kunye ukudala okuqaqambileyo.